गरिबका बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि, ९ जनालाई कैद र जरिवाना - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
गरिबका बजेटमा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि, ९ जनालाई कैद र जरिवाना
प्रकाशित मिति: १० आश्विन २०७५, बुधबार
लेखा अधिकृत प्रवीण घिमिरेलाई एक लाख १४ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ जरिवानासहित चार महिना कैद फैसला भएको छ । लेखा अधिकृत प्रविन घिमिरेविरुद्ध २ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विगो कायम गरिएको थियो ।
भ्रष्टाचारी ठहर भएका पाँच जना कार्य प्रबन्धकलाई जरिवानासहित कैदको फैसला भएको छ । लालबहादुर सिवालाई दुई लाख ४८ हजार ९१२ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित छ महिना कैद फैसला भएको छ ।
सञ्जयकुमार झालाई ३ लाख ७८ हजार २६० रुपैंया जरिवाना ठहर गरी आठ महिना कैदको ठहर भएको छ । जयराम पन्तलाई ३ लाख एक हजार ६८० जरिवाना सहित सात महिना कैदको फैसला भएको छ । अखिलेश चन्द्र दासलाई १७ लाख ३९५ रुपैयाँ जरिवाना गरी एक वर्ष कैद सजायको फैसला भएको छ ।
हरेराम वाग्लेलाई ७४ हजार ५८० जरिवाना गरी तीन महिना कैद फैसला भएको छ । दुर्गाबहादुर गान्धारीलाई ८५ हजार २५० रुपैंया जरिवानासहित तीन महिना कैद फैसला भएको छ । गरिबी निवारण कोषले विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम सञ्चालन र अनुगमनका लागि जिल्ला तहको कार्यप्रवन्धक नियुक्त गर्छ ।
गरिबी निवारण कोषका केही कर्मचारीहरुले फर्जी बिल बनाई भ्रष्टाचार गरेको भनी अख्तियारले लगाएको आरोपलाई विशेष अदालतले ‘सही’ ठहर्‍याएको हो । कोषका कर्मचारीहरुले यातायात खर्चका नाममा फर्जी बिल पेस गरेर भारी रकम दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । जिल्ला भ्रमणका नाममा उनीहरुले सवारीसाधन रिजर्भ गरेको देखाई लाखौंको नक्कली बिल बनाएका थिए ।
पहिरोले अवरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको कोठे सडक ३७ दिनपछि संचालकमा
भदौ २७ ।चौतारा,सिन्धुपाल्चोकको राम्चेमा गएको पहिरोबाट थुनिएको सुनकोसी नदीको धारले अरनीको राजमार्गको कोठेमा […]
राजधानीका सडकको रिपोर्टकार्ड : ६ सडकमा ६०२ जनाको मुद्दा
काठमाडौं । राजधानीका अधिकांश सडक सम्पन्न हुनुपर्ने म्याद सकिएको छ । काम आधा पनि भएको छैन । ठेक्का लिन […]
मुख्य सचिवमा नियुक्त भएपछि बधाई ग्रहण गर्दै डा. सोमलाल सुवेदी । सुवेदीलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले […]
सुनको भाउ बढ्यो,कति छ आज ?
काठमाडौं। केहिदिन देखि स्थिर रहँदै आएको सुनको भाउ मंगलबार तोलामा ३ सय रुपैयाँ बढेको छ । सुन तोलाको ५४ हजार ६ […]
काठमाडौं । हिमाल दोलखा हाइड्रोपावर कम्पनीको एक करोड ६० लाख कित्ता साधारण सेयर (आईपीओ) सूचीकृत भएको छ । […]
काठमाडौं विश्वको सयौं वायु प्रदुषित शहरको सयौं नम्बरमा,भारतका शहर संसारमै जोखिमपूर्ण
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वका तीन सशर मध्ये वायु प्रदुषणमा सयौं नम्बरमा परेको छ । सन् २०१७ माभन्दा २०१८ मा […]